I-Huawei Mate 30 Lite: umhla wayo wenkcazo uqinisekisiwe | I-Androidsis
Sele siwazi umhla wentetho yeHuawei Mate 30 Lite
Ngaphandle kwazo zonke iingxaki ezihamba nenkampani yaseAsia ngenxa ye-veto ngurhulumente kaDonald Trump, uHuawei uyaqhubeka nokulwa yonke imihla ukuze aqhubeke nokuthengisa kwimarike yomnxeba. Inkqubo ye- ukuthengisa kweefowuni zefowuni kuye kwawa ngokukhawuleza, kwaye umenzi wayo uyazi ukuba kufuneka ibuyele ngaphambili. Kungenxa yoko le nto sele isebenza kwiifowuni ezintsha, kubandakanya Umlingani 30 Lite.
Sithetha ngesixhobo esiya kuthi sifike kwimarike yokuhamba neHuawei Mate 30 kunye neMate 20 Pro, iiflegi ezilandelayo zosapho lwe-phablet ye-Shenzhen esekwe ngokufanelekileyo. Kwaye ekugqibeleni siyazi Iza kuza nini iMate 30 Lite elandelayo. Kwaye iya kuba msinyane kunokuba ulindele.
IHuawei Mate 30 Lite iya kuboniswa ngoJuni 5
Ngokusebenzisa ipowusta yentengiso, apho sazi kwakhona ukuba yeyiphi ifowuni elandelayo yeHuawei eya kuba nayo, sinokuqinisekisa ukuba, nge-5 kaJuni nge-14: 30 emva kwemini siyazi zonke iimfihlo zeHuawei Mate 30 Lite. Okwangoku, akukho nto ingako siyaziyo malunga nesi sixhobo, nangona kunokwenzeka ukuba iza kufika kunye neprosesa yeKirin 710 kunye ne-4 GB ye-RAM.
Kwelinye icala, ipowusta yentengiso iyakuqinisekisa oko IHuawei's Mate 30 Lite iya kuba notch yohlobo olwehlayo Amanzi kwiscreen, ukongeza kwiminwe yokufunda ngasemva, ukongeza kwinkqubo yekhamera kathathu. Ngokumalunga nokugqitywa, kuyacaca ukuba le modeli iya kuba ne-chassis eyenziwe ngeglasi enobushushu kunye ne-aluminium, ukubonelela ngokugqitywa kwepremiyamu kwaye baya kuba nomona omncinci kwimodeli ephezulu.
Kwaye ixabiso layo? Ukuba sithathela ingqalelo ukuba iimodeli zangaphambili zeza ngexabiso elalijikeleze i-euro ezingama-300, kunokwenzeka ukuba le Huawei Mate 30 Lite intsha inexabiso elifanayo. Ngapha koko, kwinyanga ezayo kaJuni 5 siya kuba neempendulo ezingaphezulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » Sele siwazi umhla wentetho yeHuawei Mate 30 Lite
Thelekisa phakathi kwe-Oukitel Y4800 kunye neRedmi Qaphela 7